ကလိုစေးထူး: အလုပ်ပိတ်သော တနေ့မှာ…
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ဆို စာလည်းပျောက် .. လူလည်းပျောက်နဲ့ ပရိသတ်တွေက မျှော်နေကြတာ … လက်စသတ်တော့ ကိုသံလွင်က လေဟာပြင်ဈေးမှာ ဈေးဝယ်ထွက်နေတာကိုး။
ကျမကတော့ ဈေးသိပ်မဆစ်တတ်လို့ အဲဒီလို ဈေးဆစ်ရတဲ့ ဈေးမျိုးဆို မ၀ယ်ချင်ဘူး။ ၀ယ်ခဲ့ပြီးမှ ဈေးကြီးနေရင် နောင်တ ရနေတတ်မှာစိုးလို့။ တခါတည်း ဈေးနှုန်းသတ်မှတ် ကပ်ထားတဲ့ ဆိုင်မျိုးပဲကြိုက်တယ်။
ဒါနဲ့ … သရက်သီးတခြင်း ၁-ဒေါ်လာဆိုတာ ဘယ်နှစ်လုံးပါလဲ။ ပြီးတော့ ဘာသရက်သီးမျိုးလဲ။
ဒီမှာလည်း သရက်သီး လှိုင်လှိုင်ပေါနေပြီ။
“အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေ၊ ဖန်အိုးထဲငါးလေးတွေ၊ အခန်းတွင်းမှာစိုက်ထားတဲ့ ပန်းပင်လေးတွေဟာ အလုပ် လုပ်ရလို့ပင်ပန်းတဲ့ဒါဏ်ကို ပြေလျော့စေပါတယ်” လို့ http://o-way.blogspot.com/2007/04/blog-post_6539.html ဒီဘလော့မှာ ရေးထားတာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့
ကိုယ် ပင်ပန်းတဲ့ဒဏ်ကို ပြေလျော့စေဖို့ သူတို့ရဲ့ သဘာဝနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး လှောင်ပိတ် ထားရတာကတော့ မကောင်းဘူးလို့ ထင်မိတယ်။
အဲဒီ အကောင်လေးတွေကို မွေးတဲ့သူရှိလို့ ရောင်းတဲ့သူ ရှိတာလား။ ရောင်းတဲ့သူရှိလို့ မွေးတဲ့သူရှိတာလား … ကျမ စဉ်းစားနေမိပါတယ်။
May 13, 2007, 11:48:00 PM
မလေးရှားမှာလဲ အဲဒီလို လေဟာပြင်ဈေးရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မလေးရှားက ရာသီဥတု ပူလို့လားမသိ ညဘက်လေဟာပြင်ဈေးပဲရှိပါတယ်။ ခုတော့ လွမ်းနေပြီဗျာ။..
အမ မေဒါဝီ မွေးတဲ့သူရှိလို့ ရောင်းတဲ့သူ ရှိတယ် လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မ၀ယ်ရင် ရောင်းသူလဲ ရောင်းလို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး ထင်တာပဲ။
May 14, 2007, 11:10:00 AM
It isalovely post. here, we have same kind of open market on every first sunday of the month. BTW, latin music is really good. it is one of my favourite.
May 14, 2007, 12:21:00 PM